I-Cobblestone Corner - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Bobbie
U-Bobbie Ungumbungazi ovelele
Vakashela i-Cobblestone Corner futhi uzojabulela ukufinyelela okulula kuyo yonke into kusuka ku-Cincinnati Zoo kuleli khaya elitholakala ngokuphelele.
Izivakashi zethu zizokwazi ukufinyelela lonke uhlangothi lwe-duplex ehlanganisa amakamelo okulala angu-2 phezulu ngaphezu kwegumbi lokugeza eligcwele. Indawo eyinhloko inikeza igumbi lokuphumula, ikhishi elinendawo yokudlela, ibhavu eliyi-1/2, nomshini wokuwasha nokomisa. Kukhona i-patio yokuhamba ngaphandle enefenisha yokuphumula noma yokudla ngenkathi ujabulela ukuba wedwa egcekeni elingemuva.
I-Cobblestone Corner ifakwe imibhede emisha, omatilasi, amalineni, izinto zokugeza, izinto zasekhishini, nezinye izindawo zokuhlala ozozisebenzisa.
Njengamanje ingadi yethu igcwele ngakho imifino izobe ikulindile uma ufika. Ukudla okulula kusetafuleni lasekhishini namanzi asebhodleleni esiqandisini!
Imizuzu nje engu- ukusuka ku-Interstate 75, izivakashi ziyakwazi ukufinyelela kalula emphemeni (cishe imizuzu engu-10 futhi ungaba sendaweni yokupaka!), ama-Starbucks, i-Walmart, ukuthenga kwe-antique, nezindawo zokudlela eziningi ezihlukahlukene. Sitholakala kalula cishe ngokwengxenye phakathi kwe-Lexington ne-Cincinnati.
I-Dry Ridge ngumphakathi omncane, wasemaphandleni otholakala kalula eceleni komzila we-I75 onikeza ukufinyelela okulula ezindaweni ezithandwayo ezifana nokuhlangana kwemikhumbi, i-KY Horse Park, i-Museum Yokwakha, i-Cincinnati Zoo nezinye eziningi!
UBobbie Ungumbungazi ovelele